goodmam – Khabaarpati
August 8, 2021 August 8, 2021 goodmamLeaveaComment on द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन ३ को उपाधि किरण गजमेरले जिते
द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन ३ को उपाधि विजेता घोषणा भएको छ । सिजन ३ को उपाधि किरण गजमेर ले हात पारेका छन् । शनिबार भएको फाइनलमा अन्य तीन प्रतिश्पर्धीलाई भोटका आधारमा पछि पार्दै गजमेरले उपाधि रक्षा गरेका हुन्। अमेरिकाबाट भ्वाइसके लागि भनेर नेपाल आएका किरण ‘भ्वाइस अफ नेपाल’कै लागि आठमहिनादेखि नेपालमा छन् । ‘भ्वाइस […]
सुजिता मृत्यु : दाई नातापर्नेसंग प्रेम परेपछि यस्तो योजना बनाइन्, घटनाको दिन के भयो ? (भिडियो हेर्नुस्)
July 23, 2021 goodmamLeaveaComment on सुजिता मृत्यु : दाई नातापर्नेसंग प्रेम परेपछि यस्तो योजना बनाइन्, घटनाको दिन के भयो ? (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । चितवनकी सुजिता भण्डारी मृत्यु घटनामा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेका ब्यक्ति सुजिताकै दाई नाता पर्ने हुन् । प्रहरीले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरी ति ब्यक्तिलाई सार्वजनिक गरेको हो । प्रहरीले शुक्रबार पत्रकार सम्मलेन गरी झापाको झापा गाउँपालिका(६ का २३ वर्षीय सचिन भन्ने सुकदेव भण्डारीलाई सार्वजनिक गरेको छ । उनलाई प्रहरीले […]
July 8, 2021 goodmamLeaveaComment on चितवनक सुजिता प्रकरण : एक पछी अर्को रहस्य बाहिरियो
चितवनको राप्ती नगरपालिका–३ घर भएकी २३ वर्षीया सुजिता चितवनको ब्रह्मास्थानी सामुदायिक वनमा मृ,त फेला परेकी थिइन् । असार ११ मा बिहान ६ बजे घरबाट हिँडेकी सुजिताले त्यसैदिन दिउँसो दिदिलाई फोन गरेर आफू अप,हरणमा परेको जानकारी गराएको परिवारले बताएका छन् । आइतबार साँझ जंगलमा च्याउ टिप्न गएका स्थानीयले श,व देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । सुजताको […]
July 8, 2021 goodmamLeaveaComment on हराएको तीन दिन पछि मृत फेला परेका साढे तीन वर्षीय बालकको आफ्नै दिदीले ह ‘त्या गरेको खुलासा
काठमाडौ । कैलालीको टीकापुरमा हराएको तीन दिन पछि मृत फेला परेका साढे तीन वर्षीय बालकको घटनामा प्रहरीले आश्चर्यजनक तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । विहिवार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रहरीले घटनावारे जानकारी गराएको हो । प्रहरीले घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा उनकै दिदी नाता पर्ने २ किशोरीलाई पक्राउ गरेको छ । उनकै दिदी नाता पर्ने १५ वर्षीया किशोरी […]
July 8, 2021 goodmamLeaveaComment on युवतीको खातामा एकै पटक १६ करोड आएपछि …
काठमाडौं । मान्नुहोस् तपाइँको बैंक खातामा दुई हजार रुपैयाँ पनि छैन तर अचानक तपाइँलाई थाहा हुन्छ कि तपाँईको खातामा १६ करोड भन्दा धेरै रुपैयाँ जम्मा भएको खबर आउँछ । खातामा दुई हजार पनि नभएको तपाँईको खातामा अचानक १६ करोड भन्दा धेरै रकम आयो भने सोच्नुहोस् तपाइँको अवस्था कस्तो होला ? यदि तपाईंले चिठ्ठा मार्फत त्यो […]
July 8, 2021 goodmamLeaveaComment on पिपलको पात खानुहोस्, ठीक पार्छ यस्ता गम्भिर समस्या
काठमाडौं । हाम्रो समाजमा पिपलको पूजा गरिन्छ । धार्मिक विश्वासअनुसार लक्ष्मीको श्रापका कारण विष्णु भगवानले एकपटक वनश्पती बन्नु परेको थियो । जहाँ उनी पिपल बनेर जमिनमा उम्रिएका थिए । तर वैज्ञानिक दृष्टिकोणले पनि पिपलको महत्व कम छैन । यो मात्रै यस्तो बनस्पती हो, जो २४ घण्टा अक्सिजन दिन्छ । पिपलका पातलाई धेरै प्रकारका औषधि बनाउन […]
July 8, 2021 goodmamLeaveaComment on दुबईकी राजकुमारीको बडीगार्डसँग अ’वैध स’म्बन्ध, कसैलाई न’बताउन भ’न्दै दिइन् २० करोड!
काठमाडौं । दुबईका शासक मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूमकी राजकुमारी पत्नीको उनका अंगरक्षकसँग सम्बन्ध भएको खुल्न आएको छ । राजकुमारी हाया बिन्त हुसेनले अंगरक्षकलाई उनीहरूको सम्बन्धबारे चुप लाग्न करिब २० करोड रूपैयाँ पनि दिएको खुलासा भएको छ । डेली मेलले यो दावी बेलायती अदालतमा भएको सुनुवाईको आधारमा गरेको छ । दुबईका शासकले राजकुमारी हायालाई २०१९ […]
July 8, 2021 goodmamLeaveaComment on …त्यसपछि आफ्नै बुवाको गर्भ बोक्ने निर्णय गर्दै २५ बर्षकी यी युवतीले जन्माइदिइन् आफ्नै बुवाको बच्चा….!
काठमाडौं । पिता–पुत्रीको सम्बन्ध निकै पवित्र तथा मर्यादायुक्त सम्बन्ध हो । कुनै छोरीले आफ्नो बाबुको सन्तान जन्माउने कुरा कल्पना गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । तर बेलायतमा भने एउटा यस्तै घटना भएको छ । बेलायतमा एक २५ वर्षकी युवतीले आफ्नो बुवाको सन्तान जन्माइदिएकी छिन् । वास्तवमा ती युवतीले सरोगेट मदर अर्थात् भाडाको कोख दिएर आफ्नो सौतेलो […]
राजकीय सम्मानका साथ दिलिप कुमारको अ’न्तिम सं’स्कार, अं’गालो मा’रेर रोइन् सायरा (तस्बिरसहित)
July 8, 2021 goodmamLeaveaComment on राजकीय सम्मानका साथ दिलिप कुमारको अ’न्तिम सं’स्कार, अं’गालो मा’रेर रोइन् सायरा (तस्बिरसहित)
काठमाडौं – बुधबार नि’धन भएका बलिउड अभिनेता दिलिप कुमारको अ’न्तिम सं’स्कार गरिएको छ । लामो समयदेखि बि’रामी रहेका दिलीपको ९८ बर्षको उमेरमा मुम्बईको हिन्दुजा अस्पतालमा नि’धन भएको हो । उनको अ’न्तिम सं’स्कार बुधबार साझँ नै रा’जकीय सम्मानका साथ गरिएको छ । अ’न्तिम सं’स्कारमा बलिउडका कलाकारहरु सहभागी भएका थिए । दिलिप कुमारको नि’धन भएपछि उनकी श्रीमती […]
July 8, 2021 goodmamLeaveaComment on खुसीको खबर ! सियोनाले विश्वको सब भन्दा महँगो जी’न थे’रापी लटरी जित्न सफल , निःशुल्क उपचार गरिने
नर्स एलिना गुरुङ र वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा सन्दिप श्रेष्ठ आफ्नै शिशुको उपचार खर्च अभाव’मा त’ड्पि’रहे’का थिए।१० महिनाकी छोरी सियोना श्रेष्ठ स्पा’इनल मस्कु’लर अर्थोपी रोगबाट पी’डित बनेपछि उनका अभिभावक खर्च अभाव’मा तड्पिए’का थिए। तर अब सबै कुराको समाधान भएको छ। नोभेर्टिस प्रबन्धित पहुँच भएको प्रोग्राममा सियोनाले लटरी जित्न सफल भएकि छिन । सियोनाका बुवा सन्दिपले […]